Mmụta dị elu na mgbanwe mgbanwe nke akụkụ anọ | Martech Zone
Mmụta dị elu na mgbanwe mgbanwe nke anọ
Monday, October 11, 2010 Satọde, Satọdee 26, 2015 Adam Obere
Itieslọ akwụkwọ mahadum na-egwu bọọlụ na soshal midia! Ha nọ na Twitter, Facebook ma na-amalite iji ngwa geolocation dị ka Foursquare. Gịnị kpatara nke a ga-eji rụọ ọrụ? Imirikiti ndị na-achọ ịmụrụ akwụkwọ na-eme mkpebi na ebe ha ga-aga ụlọ akwụkwọ na njem nlegharị anya. Ya mere ịme echiche dị mma n'oge njem mbụ dị mkpa. Lọ nwere oghere na-enye ndị mahadum ohere inyocha ụlọ akwụkwọ ahụ n'ụzọ ọhụrụ. Enwere ike iji ngwa ahụ hapụ ndụmọdụ iji hụ na atụmanya mara ebe ịga na ihe ị ga-eme n'oge nleta. Ihe ndị ọzọ kpatara mahadum iji jiri ngwa geolocation mee ihe bụ:
Kwupụta obere ihe amaara
Kekọrịta ozi gbasara akara ala, ụlọ, na adres
Adreesị ajụjụ tupu ha na-jụrụ (nchekwa, igodo)
Nye onyinye na baajị iji gbaa ụmụ akwụkwọ ọhụụ ume ka ha nyochaa ogige agụmakwụkwọ ahụ
Kekọrịta ọdịnala nke ụlọ akwụkwọ
Mee ka umu akwukwo mikpuru n’ime obodo n’ogige ulo akwukwo
Nata ndumodu site na ndi otu akwukwo
Ọzọ ojiji maka Foursquare na mahadum ọnọdụ bụ maka Alumni "re-eleta kampos". Foursquare nwere ike inyere ha aka ịchọpụta ihe na-eme kemgbe ha gụsịrị akwụkwọ. Iji maa atụ, alum ga - enyocha ma hụ ụlọ ọhụrụ. The dị iche iche odida obodo nwere ike ịbụ ihe dị mkpa ka ụfọdụ ndị revisiting na Mahadum…. oge ga-agwa onye ahụ. Gbakwunye na njirimara ahụ bụ ngwa nke ga-agwa ha nzube ụlọ ọhụrụ na akụkọ "ọhụụ". Ọ na - enyere alum aka ijikọ ma ghara iche na ọ ga efu.
Harvard bụ otu ụlọ akwụkwọ na-eji Foursquare. Ha na-enye akụkọ ihe mere eme ihe na-atọ ụtọ ihe na-eme na kampos, nke niile nwere ike dị na Foursquare n'okpuru Harvard peeji. Mahadum Harvard nwere ọtụtụ peeji na Foursquare maka ọtụtụ ụlọ ya.
Mahadum mara na ha nwere otutu ihe. Ngwa dị iche iche iji nyere aka ịkesa ihe ndị a niile bụ Udiri.Nke a na-enye ohere maka ndị ọrụ ịlele yana bulite foto na ozi ịkekọrịta maka mmemme ahụ. Ngwa a nwere ike ikpokọta ụmụ akwụkwọ ọhụrụ na ndị okenye. Ha jikọtara site na ahụmịhe ha na-ekerịta ma nwee ike ịhụ n’ezie ihe na-eme na ihe omume na kampos. Dabere na Mashable, na Mee 2010, Mahadum St. Edwards ji Whrrl mee ihe iji mee emume ngụsị akwụkwọ ya.
Ihe mkpali ozo diri mahadum ibido iji ngwa geolocal bu ego enwere ike ichikota. Ihe omuma a nwere ike igosi ihe ndi mmadu na eme otutu, ndi mmadu, omenala mahadum ma nwee ike ime mkpebi nke oma dabere na ihe umu akwukwo a zara. Institutionslọ akwụkwọ agụmakwụkwọ ka elu nke nabatara ngwa geoloaction ga-aga n'ihu egwuregwu ahụ ma nwee ike ijikọ ya na ụmụ akwụkwọ ya n'ụzọ bara uru.
Tags: kọleji iheiheakụkụ anọgeolocationmahadumihe omume mahadum
Jenụwarị 6, 2011 na 10:05 PM
Kyle, daalụ maka nnukwu ọkwa a. Abụ m ọkachamara nkwukọrịta na obere kọleji nka na-akụzi ihe na Moorhead, Minnesota (http://foursquare.com/concordia_mn). Anyị enweghị ọtụtụ ụmụ akwụkwọ na-eji ya mana ha na-eleba anya n'ụzọ iji gbasaa ọrụ anyị na-atụ anya na anyị ga-ewebata ọrụ anyị.
Na-eche ma ọ bụrụ na ị chere na ọ dị mkpa inwe ọpụrụiche ma ọ bụ ndụmọdụ n’ogige ụlọ akwụkwọ? Anyị na-arụ ọrụ na-agbakwunye ndụmọdụ mana anyị na-agbasi mgba ike iji jikọta akụkụ ndị na-agba ume nke akụkụ anọ. Have nwere aro ọ bụla?
Apr 30, 2012 na 11: 04 AM
Daalụ Kyle maka ịgagharị ohere nke iji mahadum mmekọrịta site na Mahadum. Mmụta ka elu dị na nkpuchi nke mgbanwe. Ọ karịrị ma karịa Teknụzụ Ozi ma dabere na Ihe Ọmụma, Ihe Ọmụma, Teknụzụ Nhazi Ihe Ọmụma na andlọ Ọrụ Ihe Ọmụma.
'Knowmatics - A New Revolution in Higher Education' Journal of the World Universities Forum 4,1,2011: 1-11 na-atụle ụfọdụ n'ime okwu ndị a n'ụzọ miri emi na-abụghị Mathew Theories of Knowledge oriri-Production, Knowmatics and Knowledge Industries. A na-edozi nsogbu ndị metụtara ya http://www.slideshare.net/drrajumathew